Sayenzi Yezwi Kupfuura | Martech Zone
Iyo sainzi yeIzwi Kupfuura
Chitatu, October 28, 2015 Chitatu, October 28, 2015 Jason McCoy
Paunenge uchitarisa kushanda ne izwi pamusoro peartist kune yako yakabata mameseji, anotsanangura video, kushambadzira kana chero chinhu chinoda murondedzeri ane ruzivo, zvakakosha kusarudza mumwe munhu ane tarenda chairo pane zvaunoda. Izwi rehunyanzvi pamusoro rinopfuura kungori munhu arikutaura mamwe mazwi, mushure mezvose, iwe unogona kuzviita iwe pachako! Kushandisa izwi rine ruzivo uye rine hunyanzvi pamusoro peartist zvakakosha pakukurukura meseji yako nenzira kwayo.
Nzira yakanakisa, mumaonero angu, kuwana iro rakakwana izwi pamusoro peartist ndeyakanaka yekare Google - kana chero ipi injini yekutsvaga yaunoshandisa! Nevazhinji nyanzvi vane ma studio avo, hauna kuganhurirwa pakutsvaga izwi pamusoro peartist munharaunda yako yemunharaunda, kuti ugone kutsvaga kusvikira iwe wawana iro rakakwana iro rako brand. Paunenge uchiita sarudzo iyoyo, izwi pamusoro pewebhu webhusaiti rinopa hupfumi hweruzivo kuti ubatsire iwe, kubva kune zvipupuriro kusvika kumasampuli ebasa ravo. Kana vasina masampuli anonyatsoenderana nezvauri kutsvaga, usatya kupinda mukubvunza uye ubvunze yemhando yekuenzanisira kuti ikupe imwe pfungwa kana vari ivo vakakodzera. Mazhinji maartist angave achitofara kuongorora chikamu cheyako chaiyo script!
Seizvo musoro wenyaya iyi wakaratidza, uyezve paine hunyanzvi kune a izwi rehunyanzvi pamusoro, kune zvekare sainzi kwazviri, uye ndipo panogona kuve nehunyanzvi hwechokwadi kuti script yako ipenye.
Inzwi Kupfuura Cadence
Kuwana cadence, iyo rhythmic simuka uye kudonha kwekutaura, chaiko muzwi pamusoro ndechimwe chinhu chakanyanya kuomarara kuti uwane kuverenga kubva pane chinyorwa, kunze kwekunge munhu ari kuverenga ari nyanzvi. Nepo isu tese tine echinyakare cadence uye kuyerera apo isu tichitaura tichitaurirana kune mumwe nemumwe, isa chinyorwa pamberi pevanhu vazhinji uye mazwi anova akadzikama uye asina chokwadi.
Inzwi rakabudirira pamusoro peanoda kurira zvakasikwa panguva imwe chete achichengeta kureba kunodiwa kwescript. Nepo vanhu vazhinji vangangomhanyisa kuburikidza nescripture kana kushamisa mazwi avo, izwi rehunyanzvi pamusoro peartist rine ruzivo uye hunyanzvi hunodiwa kutevedzera mutinhimira wekutaura kwavo kuti vakwane zvakakwana munguva yakapihwa.
Inzwi Kupfuura Toni
The inzwi rezwi inoshandiswa muzwi pamusoro inofanirwa kunyatsoenderana nechiratidzo, chigadzirwa uye script, uye zvakanyanya kukosha, mechi nenzira yechisikirwo kurira. Kunyangwe iri yakakomba uye yakadzikama kune yakabata meseji kuchipatara, kutaurirana uye mukomana / musikana ari padhuze kune bhizinesi rinotsanangudza vhidhiyo, yakasimba uye punchy yekutengesa mota yekutengesa, kana chero yeimwe isingaverengeke mamwe manzwi ezwi, inoda inodzorwa mukuita kwese, izvo zvisiri nyore nguva dzose.
Izwi rezwi pamusoro chikamu chakakura kudaro chekuratidza bhizinesi rako uye zvigadzirwa zvako kana masevhisi kune ako vatengi uye vangangove vatengi, tora izvo zvisirizvo, uye zvinogona kupangidza njodzi. Semuenzaniso, kana iwe uri kugadzira yekuzorora gwara uye matauriro ezwi rako pamusoro anotengesa uye akasimba, pamwe hauzowani kuwana yakawanda yekudzokorora bhizinesi!
Inzwi Kupfuura Vhoriyamu
apo vhorumu ndechimwe chinhu chinogona, chokwadika, kugadziridzwa mumashure mekugadzirwa, ichiri chimwe chinhu chinofanirwa kunge chiri padhuze nekukwanisika panguva yekurekodha kwezwi-pamusoro. Vhoriyamu inoda kuve neruzha rwakakwana zvekuti izwi rega rega uye nuance inotorwa nemic mic, asi kwete zvine ruzha zvekuti chero munhu anoshanda pazvinhu zvakapedzwa anoridzwa nzeve dzake! Iyo inofanirwawo kunge ichienderana mukati mese, ichirira mushe mushe. Kunyange zvingaite kuti vanhu vazhinji vashandise kuwedzera kwezwi kusimbisa izwi kana chirevo, izwi rine tarenda pamusoro pehunyanzvi richaziva mashandisiro ezvisikwa ezwi ravo, senge cadence kana toni, kuita zvakafanana chinhu. Chigadzirwa chakapedzwa hachizonzwika kuve nehunyanzvi nezvikamu zve'kuridza mhere 'pano nepapo, mushure mezvose.
Inzwi Kupfuura Kujeka / Diction
kutsanangurika yakakosha mune chero nzira yezwi pamusoro, nekuti muteereri anofanirwa kunzwisisa izwi roga roga - dai asiri ese mazwi aive akakosha kuendesa meseji, vangadai vasina kunge vari muchinyorwa. Musiyano uripo pakati pekunzwa kutaura kwezwi uchiita nekuita kwomuviri zviri pachena kuti vateereri havaone muromo wemutambi wezwi uchifamba, chinova chikamu chemanzwisisiro atinoita kutaura, saka maitiro acho anofanirwa kunge ari eural zvachose.
Kuva nyore kunzwisiswa uchiramba uchikurukura zvirokwazvo hunyanzvi, uye sainzi inonzwika pamusoro pevanyori inonyanya kugona. Taura nekukurumidza uye kumwe kujekesa kwarasika, asi kunyanyisa kutaura uye kutaura kunononoka.
Sezvauri kuona, zvikamu zvakasiyana zvezwi pamusoro pehunyanzvi zvinowanzoitika, uye sainzi yekuvabatanidza vese pamwechete mukutaurisa kwehunyanzvi inogona kuve inonetsa. Zviitise kurudyi, hazvo, uye simba reizwi pamusoro richava nemhedzisiro pakuendesa meseji yako!
Tags: cadenceZvakajekadictionmccoy zvigadzirwatoniizwi cadenceizwi pamusoroinzwi pamusorovhorumu
Senzwi pamusoro petarenda, Jason McCoy anoshandisa yakawanda yenguva yake mukamuri kadiki rakapetwa kuseri kwemic. Inzwi rake rakaverengerwa pamapurojekiti eDell, Walmart, Honda uye zvimwe zvakawanda. Iye ane hunyanzvi mukutaura kutsanangura uye online kushambadzira mavhidhiyo. Teerera ku Madhimoni aJason or verenga rake blog yemagwara uye zviwanikwa pamisoro ine chekuita nezwi pamusoro.
LIID: Akangwara CRM Kutema kubva kune yako SmartPhone
Infographic: 46% yeVatengi Vanoshandisa Yemagariro Midhiya Mukutenga Sarudzo
Sep 6, 2016 pa 10: 40 AM
Ah zvakanaka. iva anemukurumbira izwi pamusoro peactor.. Thanks for sharing this great information..